Agrochemical, Xakamaynta Duqsiga, Xanaanada Xoolaha, Cayayaanka
Nidaamiyaha Koritaanka Dhirta
Waxaan ku takhasusnay dhoofinta Cayayaanka Guriga, Sunta cayayaanka, Xoolaha, Xakamaynta Duulimaadyada, API & Dhexdhexaadiyeyaasha
Ku soo dhawoow shirkadeena
Hebei Senton waa shirkad ganacsi caalami ah oo xirfad leh oo ku taal Shijiazhuang. Ganacsiga ugu weyn waxaa ka mid ah Cayayaanka Guriga, Cayayaanka, Xoolaha, Xakamaynta Duulimaadka, API & Dhexdhexaadiyeyaasha. Alaabtu waxay u dhaxaysaa alaabta ceeriin ilaa alaabta la dhammeeyay, laga bilaabo qaacidooyinka kaliya ilaa caanaha isku dhafan. Alaabooyinka waxaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha si loo daboolo baahiyaha wax iibsiga ee kala duwan. Waxaa naga go'an inaan bixino alaabada ugu habboon iyo adeegyada ugu wanaagsan si aan u daboolno baahiyaha kobcaya ee macaamiisha.
ugu dambeeyay wararka & blogyada
Baahida caalamiga ah ee paraquat...
Markii ICI ay soo saartay paraquat suuqa 1962-kii, qofna waligiis ma malaynayn in paraquat uu la kulmi doono xaalad adag oo adag mustaqbalka. Tani heer sare ah oo aan la soo xulin herbicide ballaaran ayaa lagu qoray liiska labaad ee ugu weyn adduunka. Dhibta ayaa mar ahayd ceeb...
Rizobacter wuxuu bilaabay bio-see...
Dhawaan, Rizobacter wuxuu bilaabay Rizoderma, biofungicide loogu talagalay daawaynta abuurka soybean ee Argentina, kaas oo ka kooban trichoderma harziana kaas oo xakameynaya cudurada fangas ee miraha iyo ciidda. Matias Gorski, maamulaha noolaha caalamiga ah ee Rizobacter, wuxuu sharxayaa in Rizoderma ay tahay daawaynta abuurka noolaha ee fungicide ...
Chlorothalonil iyo fangaska difaaca ee Chlorothalonil iyo Mancozeb labaduba waa fungicides-ka difaaca ee soo baxay 1960-meeyadii waxaana markii ugu horreysay soo sheegay TURNER NJ horraantii 1960-meeyadii. Chlorothalonil waxa suuqa la galiyay 1963 dii Diamond Alkali Co. (kadib waxa laga iibiyay ISK Biosciences Corp. ee Japan)...
Ganacsiga ugu waaweyn waxaa ka mid ah Cayayaanka Guriga, Cayayaanka, Xayawaanka Xoolaha, Xakamaynta Duulimaadyada, API & Dhexdhexaadiyeyaasha.
17 Dabaq, Block A, COFCOHB Plaza No.345, Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha., Shijiazhuang, Hebei